सगर हामीले थामेको भ्रम थियो, मुलुक ९९ प्रतिशत त विदेशीले नै चलाउँदा रहेछन्
मनोज दाहाल काठमाडौ, वैशाख २४ print
जुन चिज देख्दै देखेको छैन, त्यो कसरी पत्याउन् त तिनले ? सम्झनामा आएसम्म अहिले राजनीतिमा सक्रिय कुनै पनि ठूला–साना यस्ता नेता छैनन्, जसले निष्ठा, स्वाभिमान र सदाचार पालना गरेको होस् । जसलाई हाम्रा नेता भनेर गर्वले छाती फराकिलो पार्न पाइयोस्, मुलुकको भविष्य बनाउलान् भनेर आशा राख्न सकियोस् । बिपी, गणेशमान, किशुनजी त मिथक नै भइसके । मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, भीमबहादुर तामाङ वा अरू केही एक्कादुई नेताहरू जसले राजनीतिमा असल गुण जोगाएर राखेथे, ती पनि सम्झनाबाट बिस्तारै धूमिल हुँदै गएका छन् । अब त राजनीतिमा कि पावर ब्रोकरहरू छन्, कि सत्ताका लोभीहरू । कि विदेशी एजेन्टहरू छन्, कि बहुजिब्रेहरू । कमसेकम स्कुल–कलेजका विद्यार्थीहरू यस्तै ठान्छन् । स्थिति लगभग त्यस्तै छ पनि । बहुचर्चित लोकमानसिंह कार्की (जसका अगाडि चार प्रमुख दलका नेताहरू र मुलुकका उच्च शक्तिकेन्द्र नतमस्तक देखिए) आफ्नो मन्त्रालयको सचिवमा आएपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री बलदेव शर्मा मजगैयाँ अहिले नेपाली राजनीति देखेर विरक्तिएका छन् । राजनीतिभन्दा तीर्थाटन र आध्यात्मिक अध्ययनमा बढी व्यस्त छन् हिजोआज । राजनीति नै सत्य हो भनेर जीवन अर्पित गरेका उनी सत्यको खोजीमा तिलगंगास्थित शिवपुरी बाबा आश्रम जान्छन् । साधुसन्त भेट्छन् । गम खान्छन् । ६३ वर्ष उमेरसम्म र झन्डै पाँच दशकको राजनीतिमा कसैसँग एक रुपैयाँ नमागेका र आफ्ना अग्रजहरू बिपी, गणेशमान र किशुनजीले सिकाएका राजनीतिका असल गुण जोगाएरै राखेका मजगैयाँ यतिखेर किनारामा फ्याँकिएका छन् । पदीय राजनीतिको यो समयमा उनको अहिलेको चिनारी कांग्रेस महासमिति सदस्यमात्र हो । त्यो पनि पूर्व केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले स्वतः आइलागेको । निष्ठापूर्ण राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उनी एउटा वीउ हुन् । राजनीतिको अनुहार देखेर दिक्क भएका छन् । भन्छन्, ‘पहिला सगर नै हामीले थामेको भ्रम थियो, बिस्तारै २० प्रतिशत विदेशीले चलाउँछन् भन्ने लाग्यो, पछि आधा त बाहिरबाटै हुँदो रहेछ भन्ठानेँ, अहिले त लाग्छ– मुलुक ९९ प्रतिशत त विदेशीले नै चलाउँदा रहेछन् ।’ ...
बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि भएको २०४६ सालको आन्दोलनसम्म त राजनीतिमा खराब कामका लागि कुनै स्पेस नै थिएन । २०४७ सालमा किशुनजीको सरकारले संविधान बनाउन्जेल सब ठीक थियो । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुञ्जेल पनि ठीक थियो । सैद्धान्तिक आधारमै लडिएको थियो, त्यतिखेरको चुनाव । त्यसपछि एक/दुई वर्ष पनि राजनीति खासै बिग्रन पाएन । पचासको सुरुताका जब कांग्रेस अनौपचारिक रूपमा विभाजित भयो, यसका सांसदहरू ३६ र ७४ मा बाँडिए, राजनीतिमा प्रलोभन, खरिदबिक्री र अस्वस्थ प्रभावको खेल सुरु भयो । त्यो क्रम बढ्दै २०५१ पछिको त्रिशंकु संसद्मा आफ्नो पक्षमा सांसदहरू पार्न नेताहरू लागिपरे । राजधानीका काठमाडौं होटल र शंकर होटलमा सांसदहरू थुनिए, किनबेचका लागि ।
सांसदहरूलाई प्रभावमा पार्न पैसाको खोलो बग्न थाल्यो । दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरूसँग प्रमुख नेताहरू परतन्त्र हुन थालेपछि राजनीतिको निष्ठा डगमगायो । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावसम्म नेताहरू अर्कै भइसकेका थिए । राजनीतिमा निष्ठाको मूल्य खस्कन थालेको थियो । दाङकै कुरा गर्ने हो भने एउटा क्षेत्रमा खुमबहादुर खड्काले करोडौं खर्च गरेर चुनाव लड्ने ल्याकत बनाइसकेका थिए भने अर्को क्षेत्रमा बलदेव मजगैयाँलाई टिकटै नदिलाउन उनकै जिल्लाका केही प्रभावशाली भिडिरहेका थिए । तर, मजगैयाँलाई केन्द्रबाटै किशुनजीले टिकट पठाइदिए । र, खड्काविपरीत उनी केही लाख रुपैयाँको भरमा आफूलाई जनप्रतिनिधि उभ्याउन सफल भए । खड्का र मजगैयाँ दुवैले चुनाव जिते । मजगैयाँले चुनाव २०४८ सालमा पनि लडेका थिए, खड्काजसरी नै । त्यतिखेर चुनावमा खन्याउन खड्कासँग पनि पैसा थिएन । मन्त्री भइसकेका थिएनन् । कांग्रेस कोषाध्यक्ष शैलजा आचार्यले मजगैयाँ र खड्का दुवैलाई २५/२५ हजार रुपैयाँ पठाइदिएकी थिइन् । मजगैयाँले चुनाव हारे, मध्यपश्चिमभरि उनकै क्षेत्रमा एमालेले जनमोर्चासँग गठबन्धन गरिदियो । २०४८–५१ को तीन वर्ष मजगैयाँ दाङमै कांग्रेसको किल्ला मजबुत बनाउँदै बसे । लामो समयसम्म मजगैयाँसँगै बनारसमा बसेर पढेका उनकै जिल्लाका खड्का यहीबीच राजनीतिमा एउटा नक्षत्र बनेर चम्किए, बिस्तारै बद्नाम भए, अहिले त राजनीतिक भ्रष्टाचारका कारण जेलमै छन् । कांग्रेसको छत्तीसे र चौहत्तरे समीकरणले बिग्रन थालेको राजनीति २०५१ सालको एमाले सरकारका कारण केही ट्र्याकमा आयो । नौ महिनामै एमाले सरकार गिर्यो, त्यसपछि लगातार साढे चारसम्म मुलुकमा त्रिशंकु सरकार चल्यो जसले राजनीतिको उछित्तो काढिदियो । २०५६ सालको चुनावसम्म नेताहरूको नाम कम भइसकेको थियो, बद्नाम बढी । ...
२०४८ सालको चुनाव हारेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्याबिनेटले मजगैयाँलाई सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । उनलाई कसैले सोधेकै थिएन । बधाईका फोन आउन थाले । सोध्दै नसोधी सरकारले आफूलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै उनी रिसाए र कोइरालालाई फोन गरे, ‘मलाई किन अध्यक्ष बनाउनुभयो ? म जिएम, चेयरम्यान खान राजनीतिमा लागेको हो ?’
कोइरालाले भने, ‘तिम्रै लागि भनेर गरेको हो, तिमीलाई खान मन छैन भने म नाम फिर्ता लिइदिन्छु, अहिलेसम्म अनुमोदनका लागि राजाकहाँ गइसक्या छैन ।’ मजगैयाँले नाम फिर्ता लिइदिन आग्रह गरे । कोइरालाले फिर्ता लिइदिए । दुई सातापछि मजगैयाँलाई किशुनजीको फोन आयो । मजगैयाँ कांग्रेसको जिल्ला सभापति थिए, किशुनजी केन्द्रीय सभापति ।
किशुनजीले भने, ‘तपाईं तुरुन्त काठमाडौं आउनुस् ।’ अरू केही भनेनन् । पार्टी सभापतिको आदेश मान्नैपथ्र्यो । मजगैयाँ नाइटबस चढेर काठमाडौं आए । सोझै नयाँ बानेश्वरस्थित पार्टी कार्यालय पुगे । किशुनजीको कोठामा बेनीबहादुर कार्की, योगप्रसाद उपाध्याय, वासु रिसाल थिए । किशुनजीले उनीहरू सबैलाई ‘बाहिर जानू’ भन्दिए । सबै बाहिर गएपछि किशुनजीले मजगैयाँलाई भने, ‘ल, त्यो छिस्किनी लगाउनुस् ।’
बुढाको कानमा कसैले केही सुनाइदियो र साफसँग गाली गर्ने भए कि भनेर मजगैयाँ डराए । किशुनजीले भने, ‘सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष किन खानुभएन ? कांग्रेसका २२ जना नेता आएका थिए त्यो पद माग्न ।’
मजगैयाँले विस्तारमा भने, ‘किशुनजी, हामीले राजनीतिमा धेरै दुःख पाएका छौं, तर त्यो दुःख पद खान पाएको होइन । किन खानु मैले यो पद ? हो, मैले चुनाव हारेँ, तर अर्को चुनाव पनि त हुन्छ । मेरो जनप्रतिनिधि बन्ने इच्छा हो, पद खाने होइन । जनताको प्रतिनिधि त तपाईं पनि बन्न सक्नुभएको छैन । मैले जिएम, चेयरम्यान खाएँ भने तपाईंले नै मलाई अर्को चुनावमा टिकट दिनुहुन्न । मेरो बाटो त्यो होइन किशुनजी ।’ किशुनजी बसेको ठाउँबाट उठेर मजगैयाँ भएठाउँ आए र उनलाई धाप मारे । ‘म खुसी भएँ, जानुस्, जिल्ला जानुस्, काम गर्नुस्, अर्को चुनावमा तपाईं टिकट माग्न पनि आउनु पर्दैन, तपाईंको टिकट पक्का भयो, मै पठाइदिन्छु ।’
मजगैयाँ भने दाङमै ढुक्कले पार्टीकै काममा लागिरहे । टिकट माग्न आएनन् । उनी किशुनजीभन्दा गिरिजाबाबुसँग निकट थिए । तर, टिकटका लागि न किशुनजीलाई फोन गरे, न गिरिजाबाबुलाई । पछि किशुनजीले खुमबहादुरकै हातमा उनको टिकट र ५० हजार रुपैयाँ पठाइदिए । ...
२०५६ सालको चुनाव जितेपछि किशुनजीले उनलाई शिक्षामन्त्री बनाउन खोजेका थिए । तर, खुमबहादुरलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने भएपछि किशुनजीले दाङकै अर्का नेता मजगैयाँलाई मन्त्री बनाउन सकेनन् । किशुनजीको सरकार ढलेपछि कोइरालाले उनलाई कृषि राज्यमन्त्री बनाए । त्यसबेला उनी कांग्रेस संगठन विभाग प्रमुख थिए । मजगैयाँले सपथ खान मानेनन् । कोइरालालाई भने, ‘म कांग्रेसको संगठन विभाग प्रमुखलाई राज्यमन्त्री बनाएर तपाईंले पार्टीकै अवमूल्यन गर्नुभयो ।’
कोइरालाले बाध्यता बताए । मजगैयाँसँगै अरू केहीलाई पनि राज्यमन्त्री दिने उनको दाउ रहेछ । मजगैयाँलाई फुल मन्त्री दिए अरुले राज्यमन्त्रीमात्र खान नमान्लान् भन्ने कोइरालाले ठम्याएका थिए । मजगैयाँलाई सम्झाए, ‘राज्यमन्त्री भए पनि क्याबिनेटसरह हो, तपाईंको मन्त्रालयमा अर्को फुल मन्त्री हुँदैन ।’
मजगैयाँले माने । केही महिनापछि कोइरालाले उनलाई जलस्रोतमन्त्री बनाए । तर, त्यो पदमा उनी दुई महिना पनि टिक्न सकेनन् । लोकमानसिंह कार्कीलाई आफ्नो मन्त्रालयको सचिवमा ल्याउने निर्णय आफूलाई थाहै नदिई गरिएपछि उनले मन्त्रीबाटै राजीनामा दिए । आफूले मन नपराएको मान्छे आफ्नै मन्त्रालयमा आफूलाई थाहा नै नदिई सचिवमा ल्याउने निर्णयले मजगैयाँलाई खल्लो लाग्नु स्वभाविकै थियो । कोइरालाकहाँ राजीनामा बुझाइदिए र भने, ‘गिरिजाबाबु, तपाईंले अर्कै मान्छे दिन्छु भन्नुभएको थियो, दिनुभएन, म लोकमानसँग काम गर्न सक्दिनँ ।’ कोइरालाले राजीनामा स्वीकृत गरेनन् । फकाउने प्रयास गरे । झन्डै दुई हप्तासम्म कोइरालाले राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि मजगैयाँ आफैं उनलाई भेट्न गए । बाझे । झगडा गरे– आफूले नदिनू भनेको मान्छे सचिव दिने, राजीनामा पनि स्वीकृत नगर्ने ? कोइरालाले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्नैपर्यो । ...
तत्कालीन स्थानीय रजौटाले दाङको मजगाउँ वीरता दिएपछि प्युठानबाट बसाइँ सरेका पोखरेलहरूले मजगैयाँ उपनाम लेख्न थालेका हुन् जो अहिलेसम्म आइपुग्दा थर नै हो कि भइसकेको छ । मजगैयाँ स्कुल उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागिसकेका थिए । २०१५ सालको चुनावमा उनी ८ वर्षका थिए, बुबा कांग्रेसका परिचित नेता । चुनावको कार्यालयजस्तो नै थियो मजगाउँस्थित उनीहरूको घर । भरतपुरबाट एसएलसी गरेका मजगैयाँ जब दाङमा खुलेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा ११ पढ्न फर्किए (हो, त्यतिखेर पनि ११÷१२ शिक्षा प्रणाली थियो), लेनिन शताब्दीको अवसरमा कम्युनिष्टरूले गरेको प्रदर्शनीमा तोडफोड गरेबापत समातिए । त्यतिखेर उनी नेपाल स्टुडेन्ट युथ लिग (एनएसवाइएल) सँग आबद्ध थिए । देशभरि लेनिन शताब्दीको कार्यक्रम गर्न सरकारले तत्कालीन कम्युनिष्टहरूलाई अनुमति दिएको थियो । दाङमा पनि लेनिनको सिनेमासहित प्रदर्शनी आयोजना गरिएको थियो । त्यो हेर्न पुगेका मजगैयाँ र उनका साथीहरू रिसले आगो भए । प्रदर्शनी आयोजना भइरहेको रझेनास्थित पुस्तकालय तोडफोड गरिदिए । ‘कम्युनिष्ट शासन नभई देश बन्न सक्दैन’ भन्ने लेनिनको उक्ति लेखेको बोर्ड मजगैयाँले भाँचिदिए । समातिएका उनी र उनका साथीहरूलाई अञ्चलाधीश कार्यालय लगियो । सहायक अञ्चलाधीशले पुछताछ गरे । मजगैयाँले उल्टै सोधे, ‘यो कम्युनिष्ट व्यवस्था कि पञ्चायती व्यवस्था ?’
मजगैयाँले आफूलाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा कम्युनिष्ट शासन नभई देश चल्न सक्दैन लेखेको चित्त नबुझेको बताएपछि सहायक अञ्चलाधीश चुप भए । त्यही वर्ष एघारको नतिजामा सबै विद्यार्थी फेल भए । मजगैयाँ र उनका साथीहरू बनारस जाने दाउ खोजिरहेका थिए । उनको मनसाय थियो, बनारसमा बिपीलगायत राजनीतिज्ञहरूलाई भेट्ने, पढ्ने पनि ।
दाङमा बसेर ११ पढ्न सकिँदैन भन्ने घरमा जिरह गरेर उनीहरू बनारस हान्निए । टोलीमा मजगैयाँ, खुमबहादु खड्का, तीर्थराज चेतु, मुकुन्द गौतम, महादेव शाह लगायत थिए । बनारसमा आइए पढुञ्जेल सँगै पनि बसे ठिटाहरू । पार्टीसँग नजिकिए । बिपीलाई भेटे । राजनीतिक चेतना गहिरिँदै थियो । बनारसमा त जो थिए, सबै निष्ठाले राजनीतिमा लागेका थिए । दाङ आएका बेला पञ्चायती व्यवस्थाबिरुद्ध पम्प्लेटिङ गर्ने क्रममा उनी साथीहरूसहित समातिए । उनीहरूलाई सल्यान जेल हालियो, १९ महिनासम्म । सल्यान जेलमा उनीहरूले भोक हडताल गरे । उनीहरूलाई बीए पास नगरेको भनेर राजबन्दीको सुविधा दिइँदैन थियो । फौजदारी मुद्दा परेका अन्य कैदीसरह नै व्यवहार गरिन्थ्यो । एक हप्ता भोक हड्ताल गरेपछि भर्खर माननीय भएका मरिचमान सिंह उनीहरूसँग वार्ता गर्न आए । उनीहरू छाडिए । १९ महिनापछि बनारस फर्कंदा कोही पढिरहेका थिएनन् । उनका साथीहरू कलेजमा भर्नामात्र भएर राजनीतिमै दौडिरहेका थिए ।
पढ्न छाडेका उनका अन्य साथीहरू पनि कम्मर कसेर पढ्न थाले । सबै बीए पास भए । मजगैयाँले त बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट एमए नै गरे । विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीको संस्था त थियो तर त्यहाँ सबै पञ्चायती समर्थक थिए । बिस्तारै कांग्रेस, कम्युनिष्ट समर्थक विद्यार्थीहरू आफ्नै संगठन विस्तार गर्नतिर लागे । नेपाल सरकारले बनारसका विद्यार्थीमाझ कतिपय जासुस पनि छाडेको थियो । बनारसमा नेविसंघ गठन भयो जसको पहिलो सभापति मजगैयाँ नै भए । ‘त्यतिखेर बनारसमा हामी नेपाली विद्यार्थीको ठूलो हुल थियो, एकपटक पिकनिक जाँदा ५÷६ सय हुन्थ्यौं,’ मजगैयाँ सम्झन्छन् । बनारसले नै उनलाई नेता बनायो । सुसंस्कृत र निष्ठावान नेता । साच्चिकै समाजवादी । समयक्रममा उनका अधिकांश साथी र सहकर्मीहरू फेरिए । राजनीतिमा बल, पैसा र तिकडमबिना केही हुँदैन भन्ने दर्शनबाट डोरिँदै गए । मजगैयाँ भने अहिलेसम्म फेरिएका छैनन् । बिपी, गणेशमान र किशुनजीले डोर्याएको पथमै हिँडिरहेका छन् । ...
हिजोआज भने करिब पाँच दशक आफू होमिएको राजनीति सत्य होइन रहेछ भन्ने भावनाले उनी कहिलेकाहिँ छट्पटिन्छन् । ‘हामी राजनीतिका स–साना घटनामा पनि मर्न र मार्न तयार थियौं,’ राजधानीको कपनस्थित घरमा हिन्दू धर्मशास्त्रका किताबको आडैमा उत्तम नेपालीले बनाएको पेन्टिङको तल बसेर हामी (म र सहकर्मी किरण भण्डारी) मजगैयाँसँग गफिइरहेका थियौं । उनको अनुहारमा दार्शनिक छाया पर्यो, ‘राजनीतिको लागि यत्रो सहादत तर धर्मको लागि किन कोही उभिँदैन भन्ने सोचेर मेरो मनमा धेरै दिनसम्म द्वन्द्घ भइरह्यो ।’ उनी मानवीय मूल्य र धर्ममा बढी घोत्लिन थाले । संविधानसभाको चार वर्षमध्ये लामो समय उनले तीर्थाटन गरेर बिताए । ‘संविधान बन्दैन भन्नेमा स्पष्ट थिएँ तर सभासदको हैसियतले कसैलाई त्यसो भन्न पनि सक्दिन थिएँ, बरु तीर्थव्रतमा लाग्छु भनेर नेपाल–भारतका थुप्रै ठाउँ घुमेर बिताएँ,’ उनी खुल्छन् । अध्यात्मको गहिराइ मार्ने क्रममा ब्रह्मकुमारीमा लागे । शिवपुरी बाबालाई पढे । थुप्रै साधुसन्तको संगत गरे ।
सत्यको खोजी, ध्यान र साधनामा लामो समय बिताउन थाले । अहिले अध्यात्म उनको जीवनको महत्वपूर्ण पाटो भएको छ । उनको छट्पटी केही हदसम्म शान्त भएको छ । ...
मजगैयाँको पुरानै चस्का हो साहित्य । सात कक्षामा पढ्दैदेखि कविता लेख्न थालेका उनलाई पूर्ण कदको कृति लेख्ने प्रेरणा भने २०४६ सालको आन्दोलनमा थुनिँदा मनमा उब्जेको डरले दिएको हो । यसअघि जेलमै छँदा उनले लेखेको खण्डकाव्य ‘लाहुरे’ प्रहरीले दम्पच पारिदिएको थियो । छयालीस सालमा जेल परेपछि आन्दोलन तुहिन्छ कि भन्ने एकप्रकारको डर थियो । कसैगरी आन्दोलन रोकियो भने जेलमा परेकालाई मार्छन् भन्ने लागेको थियो मजगैयाँलाई । रातिराति एघार बजे जेलबाहिर निकालेर मुटुमा त्रास भर्थे तत्कालीन शासकहरू । मरियो भने जुनी यत्तिकै जाने भयो भन्ने भयले उनले एउटा उपन्यास लेख्ने सोच बनाए । जेलकै बन्दीहरूबाट कथा पाएर सुन चाल्नेहरूको जीवनवृत्तिमा आधारित उपन्यास लेखे– नरमणि ।
यसबाहेक उनका थुप्रै उपन्यास छापिएका छन्– कुहिरो, चारु, विवशता, मानसी । कथाकिताब ‘संकल्प’ पनि निकालेका छन् । कवितासंग्रह पनि छापेका छन् । एल्बम पनि निकालेका छन् । साहित्यप्रतिको लगावले उनलाई जीवनप्रति सन्तुष्टि दिएको छ । ‘कतिपय टेन्सन भयो भने गिलास लिएर बस्छन्, म चाहिँ कलम लिएर बस्छु ।’ ...
पदमा रहँदा खाने अवसर उनलाई पनि नआएको होइन । तर, खाने कि काम गर्ने भन्ने विकल्पमा उनले पछिल्लो रोजे । ‘मैले खाइनँ, त्यसैले राम्ररी काम गर्न पाएँ ।’ हुन पनि उनको कृषिमन्त्रीत्व काल अहिले पनि कर्मचारीहरू यदाकदा सम्झन्छन् । जे नगर्ने भनेर राजनीतिमा लागियो, अहिले त्यसैको जगजगी देख्दा उनलाई बेलाबेला बित्थामा राजनीतिमा आइएछजस्तो लाग्छ । ‘जातिवाद, क्षेत्रवाद, कृपावाद हुनु हुँदैन भनेर राजनीति गरियो, अहिले त्यही राजनीतिको प्रमुख विशेषता बनेको छ’ भन्दै उदेक मान्छन् मजगैयाँ । निष्ठाको राजनीति गर्ने मुर्खमा दरिनुपर्ने अहिलेको समयमा राजनीति व्यक्तिवादी भएको छ । न पार्टी, न राजनीति नै संस्थागत हुन सकेको छ । सायद अध्यात्मको गहिराइले होला, राजनीति ‘सेफ्टी ट्यांक’ भए पनि कसै न कसैले सफा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् मजगैयाँ । ‘सेफ्टी ट्यांक’ सफा गर्ने आफ्नो कर्मबाट भाग्न चाहँदैनन् । नेपाली राजनीतिको सेफ्टी ट्यांक निकै ठूलो छ, तै पनि मजगैयाँ विचलित भएका छैनन् । हो, हरेस खानु त भएन नि ! निष्ठाको राजनीति जोक होइन, दुई दशक अघिसम्म पनि नेपाली राजनीति असल गुणले नै भरिएको थियो भनेर अहिलेको पुस्तालाई देखाउन पनि मजगैयाँको वीउ जोगाएर राख्नुपर्छ ।
मजगैयाँकै वीउ नेपाली राजनीतिलाई छाया दिने वृक्ष पनि त बन्न सक्छ !
फाइल तस्बिर: गजेन्द्र बोहोरा